सुगठित प्रकृति - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
अस्ट्रेलिया बस्ने नेपाली मूलकी युवती प्रकृति श्रेष्ठ डेढ वर्षयता बडी बिल्डिङका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली झन्डा फहराउन थालेकी छिन् ।
दैनिक हजारौं किलो लिफ्ट । वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खानपिन र सुगठनका लागि । नियमित फिटनेसबाट निर्माण भएको वलिष्ठ शरीर । अझ परम्परागत भनाइ मान्ने हो भने महिला सुन्दरतामा आउने गिरावट । यी सबै कारणले बडी बिल्डिङमा महिला आकर्षण निकै कम देखिन्छ । अझ कोमलता र शारीरीक सुन्दरतालाई पुँजी मान्नेहरूका लागि त यो नजाने गाउँको बाटो नै हो ।
नेपालजस्तो देशमा महिला बडी बिल्डिङ ? अझ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, जसमा विरलै नेपाली महिला देखिन्छन् । बडी बिल्डिङको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली महिलाको उपस्थिति त झन्डै शून्य प्राय: नै छ तर अस्ट्रेलियामा रहेकी नेपाली मूलकी युवती प्रकृति श्रेष्ठले डेढ वर्षयता बडी बिल्डिङका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा तहल्का मच्चाउन थालेकी छिन् ।
अझ रोचक त के भने पछिल्ला डेढ वर्षभित्र उनले बडी बिल्डिङमा प्राप्त गरेका उपलब्धि चकित पार्ने खालका छन् । यति छोटो अवधिमै ७ वटा गोल्ड, ३ वटा सिल्भर र २ वटा ब्रोन्ज मेडल जित्नु चानचुने कुरा होइन । यसबाहेक थप दुई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा प्रकृतिले चौथो र पाँचांै स्थान हासिल गरेकी छिन् ।
विश्वभर ग्ल्यामरस र चर्चित मानिने बडी बिल्डिङका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनको उपस्थिति भविष्यमा अझ बढ्नेदेखिन्छ । सन् २०१७ को अक्टोबरमै उनी हङकङ र बालीका केही प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदैछन् । २४/२५ अक्टोबरमा आइएफबीबी एमेच्योर ओलम्पियाका लागि अहिले हङकङमा छन् । अब २८/२९ अक्टोबरमा उनी बालीमा हुनेछिन् । ‘त्यसकै लागि दिन रात तयारी गरिरहेकी छु,’ प्रकृतिले साप्ताहिकसँग भनिन््, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मेडल जित्नु तथा नेपाली झन्डा फहराउँदै नेपालीहरूलाई अलिकति भए पनि खुसी दिलाउनु मेरो लक्ष्य हो ।’ प्रकृतिले पछिल्ला दिनहरूमा बडी बिल्डिङमा नेपाली झन्डा चिनिन थालेकोमा खुसी समेत व्यक्त गरिन् ।
मेडल जित्नकै लागि भनेर प्रकृतिले अफिसमा बिदा लिएकी छिन् भने घरपरिवार, घुमघाम र मनोरञ्जनको समयसमेत कटौती गरेकी छिन् । ‘पूरै समय बडी बिल्डिङमै लगाइरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अक्टोबरमा ठूलो गेम छ । आफूले आफ्नो देशलाई चिनाउन सके धन्य हुनेछु ।’
बडी बिल्डर मोडलका रूपमा पनि प्रकृतिको उत्तिकै सम्भावना छ । अग्लो आकर्षक सुगठित शरीर, सेक्सी जीउडाल र सुन्दर अनुहारकी धनी भएकाले प्रकृति बडी बिल्डर मोडलका रूपमा जम्न सक्छिन् । ‘कम्पिटिसनमा स्टेजको प्रस्तुति तथा पोजिङ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ महिला बडी बिल्डर श्रेष्ठले भनिन्, ‘पोजिङ गर्न आएन भने मार्क घट्छ, एकदम कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ । स्माइल दिनुपर्छ । जीउ बनाएर मात्र मार्क आउँदैन ।’
प्रकृति बडी बिल्डिङ नेचुरल भएकाले यसमा डराउनुपर्ने कारण कहिल्यै सिर्जना नभएको बताउँछिन् । महिलाहरूका लागि पनि बडी बिल्डिङमा राम्रो सम्भावना देखेकी छिन्, उनले । ‘मेहनत गर्नुपर्छ, प्यासनका साथ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले मेहनत गर्न सिके, अरूले पनि सक्छन् ।’ प्रकृतिले नेपालका बडी बिल्डर महिलाहरूलाई पनि चिनेकी छिन् । उनमा नेपाल फर्केर खेल्ने सपना पनि छ ।
सुगठित शरीरमा कालो रंगमिश्रित सुन्तलारंगी बिकिनी । खुट्टामा सेतो बुट । गलामा मेडल । हातमा नेपाली झन्डा । समाजिक सञ्जालमा ‘प्रा’ नामले चिनिने प्रकृतिको फेसबुक प्रोफाइलको तस्बिर हो यो, जसको क्याप्सनमा छ— ‘माइ विन नेचुरल ओलम्पिया कम्पिटिसन इन लस भेगास ।’ जुन उनले प्रतिस्पर्धा गरेको सन् २०१६ को प्रतियोगिता हो । उक्त तस्बिरलाई १ हजार बढीले लाइक गरेका छन् अनि थुप्रैले सेयर र कमेन्ट ।
प्रकृतिले हासिल गरेका उपलब्धिहरूपछि उनको नियमिततासमेत फेरिएको छ । प्रकृति व्यक्तिगत जीवनबाट सेलिब्रेटीको छविमा देखिन थालेकी छिन् । जो उनले गरेको हार्डवर्कको परिणाम मान्छिन्, उनी । सामाजिक सञ्जालमा प्रकृतिले मेडल जितेपछि अपलोड गर्ने तस्बिरमा संसारभरबाट नेपालीहरूका बधाई बर्सिरहेको हुन्छ भने उनका ट्रेनिङ सेसनका तस्बिरमा सफलताको शुभेच्छा । अस्ट्रेलियाका नेपाली सामाजिक संस्थाहरूबाट सम्मान पनि थापिरहेकी हुन्छिन् उनी ।
यी सबै कुराले प्रकृतिलाई आल्हादित तुल्याउँछन् । फेसबुकमा उनीप्रति मानिसहरूले ब्यक्त गर्ने धारणाले पनि प्रकृतिको सेलिब्रेटी छविलाई देखाउँछ । यो उनको जीवनमा आएको देखिने परिवर्तन हो । पछिल्ला केही वर्षमा उनको जीवनमा नदेखिने परिवर्तन पनि आएका छन् । ‘सबै कुरा परिवर्तन भैरहेका छन् । मेरो फुल टाइम बडी बिल्डिङमै बितिरहेको छ,’ प्रकृति भन्छिन्, ‘अरू धेरै कुरा छाडेर यसमै लागिरहेकी छु । नेपाललाई चिनाउने मौकाहरू आएका छन् ।’
युवतीहरू कोमल हुनुपर्छ, फिटनेसले शरीर बिगार्छ, सुन्दरता घट्छ भन्ने तर्कसँग उनलाई न त वास्ता छ, न चासो नै । उनलाई यस्ता धारणा सुनेर समय बिताउनु पनि छैन, बरु अर्को प्रतिस्पर्धा र अर्को सफलतालाई लिएर बढी चिन्तित हुन्छिन् उनी । प्रकृति नियमित सात–आठ घण्टा जिममै बिताउँछिन् । खानपिन र जीवनशैलीमा पनि प्रशस्त परिवर्तन ल्याएकी छिन् । फिटनेससँगै डाइटमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । ‘दिनमा ६ पटक खान्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘चिल्लो–पिरो खान्नँ, हेल्थी र बोयल खानेकुरा खान्छु ।’ उनको मेनुमा दैनिक तीनवटा प्रोटिनयुक्त र तीनवटा शाकाहारी खानेकुरा समावेश हुन्छन् । बोयल चिकेन रोस्ट, भेजिटेबल, माछा, अन्डाको सेतो भाग उनका मुख्य परिकार हुन् । बडी बिल्डरहरू नुन पनि खाँदैनन् ।
खर्चका हिसाबले पनि बडी बिल्डिङ उत्तिकै महँगो छ । खानामा मात्र उनको दैनिक ४० अस्ट्रेलियन डलरसम्म खर्च हुन्छ । जुन वार्षिक झन्डै १२ लाख हाराहारी नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । अझ त्यसमा फिटनेस, ट्रेनिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदाको खर्च जोड्ने हो भने हिसाब थप चर्को हुन्छ । प्रकृतिका अनुसार खाना कुनै बेला अरूले समेत स्पोन्सर गरिदिन्छन् । प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा भने सबै खर्च आफंैले जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
बडी बिल्डिङप्रतिको प्रकृतिको रुचिलाई उनको परिवार तथा साथीभाइले पनि राम्रो साथ दिइरहेका छन् । ‘परिवारको सपोर्ट नपाएको भए त केही गर्नै सक्दिनथें,’ उनले भनिन्, ‘परिवार र साथीहरूकै सपोर्ट पाएर यहाँसम्म आइपुगेकी छु ।’ शारीरिक अभ्यासका क्रममा उनले विभिन्न वजन उचाल्नुपर्छ । लिफ्ट जोड्ने हो भने दैनिकै हजारौं किलो उचाल्नुपर्छ,’ उनले बडी बिल्डिङ एक्सरसाइजको किस्सा सुनाइएन्, ‘एक्सरसाइज अलि गार्‍है हुन्छ ।’ अहिले फुल समय जिम र फिटनेसमै लगाइरहेकी प्रकृति फुर्सदमा भने मुभी हेर्छिन् वा घुम्न रुचाउँछिन् ।
साढे दुई वर्षअघि टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीकी जागिरे प्रकृतिले कार्यालय, घर, घुमघाम र अध्ययनमै समय बिताइरहेकी थिइन् । स्वास्थ्यप्रति कन्सस भएकाले नियमित जिम छुट्ने कुरै भएन् । बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने कुरा त उनले सोचेकी पनि थिइनन्, पदक जित्ने कुरा त झन टाढाको विषय ।
सन् २०१५ मा गुठी अस्ट्रेलियाले सिड्नीमा काइट फेस्टिभल आयोजना गरेको थियो । उक्त फेस्टिभलमा प्रकृति पनि पुगेकी थिइन् । विभिन्न बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा मेडल जितेका व्यवसायिक बडी बिल्डर सन्तोष श्रेष्ठलाई उक्त फेस्टिभलमा सम्मानित गरियो । त्यही क्रममा जिममा रुचि राख्ने प्रकृतिले सन्तोषलाई भेटिन् । सन्तोषलाई भेट्नु नै प्रकृतिको बडी बिल्डिङका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसम्म पाइला नाप्ने टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । अस्ट्रेलियामा विभिन्न बडी बिल्डिङ उपाधि जितेर चर्चित भैरहेका सन्तोषले नै उनलाई बडी बिल्डिङका सम्भावनाहरू देखाए ।
‘जिम पहिलेदेखि नै खुब मन पथ्र्यो तर फिटनेसका लागि मात्र जिम जान्थे,’ प्रकृतिले बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा आउनुको कारण खोलिन्, ‘प्रतियोगिताहरूमा कसरी सहभागी हुने, के गर्ने भन्ने जानकारी थिएन । सन्तोषलाई भेटेपछि देश/विदेशका प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाए ।’ सन्तोषकै प्रेरणामा आफूले बडी बिल्डिङमा मेडलहरू जितेको बताउने प्रकृति त्यसपछि जिममा बढी ध्यान दिन थालिन् । सन्तोषकै सल्लाह र अग्रसरतामा प्रकृतिले बडी बिल्डिङ प्रतियोगिताको तयारी गरिन् ।
सन् २०१६ को पहिलो प्रतियोगिताबाटै उनले दुई वटा गोल्ड, एउटा सिल्भर मेडल जितिन् । सन् २०१६ को मार्चमा पहिलो पटक मेलबर्नमा आयोजित ‘राइजिङ स्टार एन्ड रक्की अफ द इयर’ प्रतियोगितामा सन्तोषले नै भाग लिन प्रेरित गरे । त्यसका लागि आफूले चार महिना तयारी गरेको प्रकृतिको भनाइ छ । उनको मेहनतले राम्रो परिणाम दियो । भाग लिएको पहिलो प्रतियोगिताबाटै दुई गोल्ड र एक सिल्भर मेडल जितेपछि प्रकृति अझ हौसिइन् । उनले भनिन्, ‘चार महिना केही पनि नहेरी सबै टाइम यसमै लगाएकी थिएँ, सुखद परिणाम पनि पाएँ ।’ मेलबर्नबाट सुरु भएको उनको बडी बिल्डिङ यात्रा अहिले हंगेरी, मंगोलिया हुँदै अमेरिकाको लस भेगाससम्म पुगिसकेको छ ।
के भन्छिन् प्रकृति ?
मेरो सपना बडी बिल्डिङमा जतिसक्यो धेरै कम्पिटिसन गर्ने हो । यो जीवनभर गर्न सकिने प्रतिस्पर्धा होइन । त्यसैले जतिसक्यो बढी प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ ।
युवाहरूलाई बडी बिल्डिङमा राम्रो अवसर छ । हामीले आइसिएन नेपाल खोलेका छौं, त्यसबाट देश/विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई बडी बिल्डिङका फिल्डमा स्पोन्सर तथा सपोर्ट गर्ने लक्ष्य छ । हेल्थी र फिट हुनुपर्छ भनेर सन्देश प्रवाहित गर्ने उद्देश्य छ । बडी बिल्डिङ पढ्न पनि लागिरहेकी छु । त्यसपछि फिटनेस र डाइटका सम्बन्धमा अरूलाई सिकाउन सक्ने हुन्छु । त्यसले मेरो अभियानमा थप सहयोग पुग्नेछ ।
अहिले नेपालीहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कन्सस छैनन् । कतिपय नेपाली युवा नचाहिने बाटोमा लागिरहेका छन् । उनीहरूलाई फिटनेसतर्फ आकर्षित गर्न सकियो भने राम्रो बाटोमा लाग्छन् । उनीहरूलाई नराम्रो बाटोमा लाग्न नदिई फिटनेस र जिममा फोकस गराउन सकियो भने सकारात्मक परिणाम आउँछ । मेरो इच्छा पनि यही छ । हामीले पाँच जना नेपाली खेलाडीलाई हालसालै थाइल्यान्डमा सम्पन्न एक प्रतियोगितामा सहभागी गरायौं । राम्रो सम्भावना भएका नेपाली युवा खेलाडीहरूलाई छानेर प्रशिक्षण दिने, स्पोन्सर गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागी गराउने योजना पनि छ ।
को हुन् प्रकृति ?
काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको मिलनचोकमा जन्मिएकी प्रकृति बुवा कन्हैयाराज श्रेष्ठ तथा आमा इन्द्रप्रभा श्रेष्ठकी एक्ली छोरी हुन् । उनका एक दाजु तथा एक भाइ छन् ।
सानो छँदा नृत्यमा रुचि राख्ने प्रकृतिले ज्ञानमन्दिर बालाजुबाट एसलएसी पास गरेकी हुन् । उनी ज्ञान मन्दिरमा पढ्दा नृत्यको भ्याली च्याम्पियनसिपमा समेत सहभागी भएकी थिइन् तर सन् १९९६ मा परिवारसँगै उनी अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बसाइँ सरिन् । प्रकृतिले लउनसेस्टन स्कुल तास्मानियाबाट कक्षा ११ र १२ सकेकी हुन् ।
त्यसपछि उनमा मल्टिमिडिया डिजाइनर बन्ने रुचि जाग्यो । ‘डिजाइनिङ खुबै मन पथ्र्यो,’ प्रकृतिले भनिन्, ‘त्यसैले मल्टिमिडिया पढे ।’ प्रकृतिले सेन्ट्रल क्वीन्सल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट मल्टिमिडियामा ब्याचलर गरेकी छिन् ।
५८ किलोग्राम तौल भएकी प्रकृति ५ फिट ३ इन्च अग्ली छिन् । अस्ट्रेलियाको ओप्टस टेलिकम्युनिकेसनमा १४ वर्षदेखि टेक्निकल म्यानेजरका रूपमा कार्यरत प्रकृति अहिले सपरिवार सिड्नीमा बसोबास गर्छिन् ।
राइजिङ स्टार एन्ड रक्की अफ द इयर—२०१६ (मेलर्बन)
 गोल्ड मेडल— नोभिस फिटनेस क्याटोगोरी
 गोल्ड मेडल— ३० प्लस फिटनेस मोडल क्याटोगोरी
 सिल्भर मेडल— ओपन फिटनेस मोडल क्याटोगोरी
मेलबर्न क्लासिक— २०१६ (मेलबर्न)
 गोल्ड मेडल— ओपन फिटनेस मोडल क्याटोगोरी
 गोल्ड मेडल— ओपन स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
फिटनेस एक्स्पो— २०१६ (मेलबर्न)
 गोल्ड मेडल— प्रो फिटनेस क्याटोगोरी
 गोल्ड मेडल— प्रो स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
 अस्ट्रेलियन प्रो टाइटल
आईएनबीए/पीएनबीए वल्र्ड च्याम्पियनसिप—२ ०१६ (बुडापेस्ट, हंगेरी)
 पाँचौ स्थान— प्रो स्पोर्ट्स मोडल वल्र्ड च्याम्पियनसीप क्याटोगोरी
बाली प्याराडाइज च्याम्पियनसिप—२०१६ (बाली)
 पाँचौं स्थान— प्रो स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
आईएनबीए/पीएनबीए नेचुरल ओलम्पिया—२०१६ (लस भेगास)
 गोल्ड मेडल— ३० प्लस स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
 सिल्भर मेडल—ओपन अम्याचोयर स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
 ब्रोन्ज मेडल—प्रो स्पोर्ट्स मोडल क्याटोगोरी
आईएफबीबी एसियन च्याम्पियनसीप—२०१६ (मंगोलिया)
 चौथो स्थान
 सिल्भर—प्रो स्पोर्ट्स मोडल क्याटागोरी
अभिनयको क्रस मोडमा हमाल
साउन–भदौमा मन त्यसै रोमान्टिक हुन्छ भनिन्छ, किन ?
म्यान अफ द वल्डमा डा. श्री राम चन्द